Raw YK-11 Powder (431579-34-9) ထုတ်လုပ်သူများ - Phcoker Chemical
ကုန်ကြမ်း YK-11 အမှုန့် (431579-34-9)
မတ်လ 6, 2020
YK-11 အမှုန့်သည်ရွေးချယ်သော androgen receptor modulators (YK11 အမှုန့်) အုပ်စုဝင်ဖြစ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့် YK11 သည်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကုန်ကြမ်း YK-11 အမှုန့် (431579-34-9) ကဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း YK-11 အမှုန့် (431579-34-9) ဖျေါပွခကျြ
Myostine ဟုလည်းလူသိများသည့် YK11 သည်စျေးကွက်တွင် YK11 အမှုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာဒြပ် steroidal ရွေးချယ်အန်ဒရိုဂျင်အဲဒီ receptor modulator ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤဆေးသည် C2C12 myoblasts တွင်စသည်တို့ in an anolicolic လှုပ်ရှားမှုရှိပြီးဒီနှင့်စပ်လျဉ်း။ dihydrotestosterone (DHT) ထက်ပိုမိုစွမ်းရည်ကိုပြသည်။ YK11 သည် Myostatin inhibitor ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်သင့်အားကြွက်သားနှင့်အဆီဆုံးရှုံးရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။
ကုန်ကြမ်း YK-11 အမှုန့် (431579-34-9) S ကpecifications
ထုတ်ကုန်အမည် ကုန်ကြမ်း YK-11 အမှုန့်
ဓာတုအမည် YK11, (17a, 20E) -17,20 - [(1-Methoxyethylidene) bis (oxy)] - 3-oxo-19-norpregna- 4,20-diene-21-carboxylic အက်ဆစ် methyl Ester; YK11 ((17α, 20E) -17,20 - [(1-methoxyethylidene) bis- (oxy)] - 3-oxo-; DNA ကို (Terrabacter strain YK11 16S rRNA ဗီဇအပိုင်းအစ); GenBank AB070463
မူးယစ်ဆေးအတန်းအစား YK11 အမှုန့်
CAS အရေအတွက် 431579-34-9
InChIKey KCQHQCDHFVGNMK-DEIKBOPOSA-N ကို
မော်လီကျူး Formula C25H34O6
မော်လီကျူး Wရှစ် 430.53386
အရည်ပျော် Point 190-200 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Freezing Point ရရှိနိုင်ပါကဒေအဘယ်သူမျှမ
ဇီဝဗေဒတစ်ဝက်-ဘဝ တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်မူတည်ပြီး 6-10 နာရီ,
Solubility Propylene Glycol, DMSO, အီသနော
ကုန်ကြမ်း YK-11 အမှုန့် Application ရွေးချယ်အန်ဒရိုဂျင် receptor Module, Myostatin တား
ကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်း YK-11 အမှုန့် (431579-34-9) ဖျေါပွခကျြ
အသုံးပြုသူများစွာက YK11 သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်၏စွမ်းရည်ကိုအပြည့်အဝသော့ခတ်ရန်နှင့်ကြွက်သားအမြန်ရရှိရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ YK11 သည် myostatin ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ပြီး၎င်းသည် myostatin inhibitor ဖြစ်စေသည်ဟုဆိုသည်။ YK-11 သည်ထိုဒေသရှိအားအပြင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ YK ကို LGD-4033 နှင့်အခြားထုတ်ကုန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရပါ။
သို့သော် YK-11 ကုန်ကြမ်းအမှုန့်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ခိုင်မာသော်လည်း၎င်းဒြပ်ပေါင်းနှင့်လေ့လာမှုအနည်းငယ်သာရှိခဲ့သည်ကိုသတိရပါ။ ဤသည်မှာလူအများစု Ostamuscle, RAD-140 သို့မဟုတ် GW-501516 ကဲ့သို့သောအခြားသူများနှင့်မသွားလိုသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
အနည်းဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်ကြွက်သားများကိုလျင်မြန်စွာတည်ဆောက်နိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့် YK11 သည် bodybuilders မှစိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိခဲ့သည်။
တဦးတည်းဆယ်လူလာလေ့လာမှု YK11 ကြွက်သားထုထည်တိုးပွါးကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ သုတေသီများကကြွက်သား-တည်ဆောက်ခြင်းပရိုတိန်း follistatin (က myostatin inhibitor) တိုးပွါးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
YK11 လည်းအရိုးကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်။ အရိုးဆဲလ်တွေအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ YK11 အရိုး-တည်ဆောက်ခြင်းပရိုတိန်း၏အဆင့်ဆင့်တိုးတက်လာခဲ့သည်။
YK11 နှင့်အတူစမ်းသပ်ကြသူအချို့ကကာယဗလအနည်းငယ်မျှသာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူအကြီးကြွက်သားအကျိုးအမြတ်နှင့်အဆီဆုံးရှုံးမှုသတင်းပို့ပါ။ သို့သော်အဲဒီမှာ YK11 မရှိတိရိစ္ဆာန်သို့မဟုတ်လူ့လေ့လာမှုများလက်ရှိနှင့်၎င်း၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှင်းလင်းသည်။
လှုပ်ရှားမှု၏ကုန်ကြမ်း YK-11 အမှုန့် (431579-34-9) ယန္တရား
YK11 DHT မှအလားတူဓာတုဖွဲ့စည်းမှုရှိပြီးဒီက receptors အန်ဒရိုဂျင်မှချည်နှောင်လမ်းဖြင့်ပြသနေသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ဆီးကျိတ်ကျန်းမာရေး, ဆံပင်ကြီးထွားမှု, နှင့်သင့်လျော်သောအပျိုဖော်ဝင်ဖှံ့ဖွိုးတိုးမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သဘာဝကျကျ DHT ထုတ်လုပ်သည်။
သုတေသီများကကြွက်သားတည်ဆောက်ရန်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေမယ့်ဆဲလ်လေ့လာမှုကိုပြု၏။ ရလဒ်ကရိုးရိုး follistatin အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းပြသပါ။ Follistatin စစ်ဆေးမှုများအတွက် myostatin စောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်သောလူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိအခြားသဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်ပရိုတိန်းသည်။ Myostatin သူ၏အလုပ်ထိနျးခြုပျကြွက်သားကြီးထွားပြုခြင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဝေးကိုသာ YK11 ကုန်ကြမ်းအမှုန့် myostatin တားစီးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထား YK11 လည်း DHT များကဲ့သို့လုပ်ဆောင်တဲ့တံခါးပေါက်နှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဖြင့်အရိုးကြီးထွားမြှင့်တင်ရန်နိုင်သည်ကိုအကြံပြုထားသည်။
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ကုန်ကြမ်း YK11 အမှုန့် (431579-34-9) ၏
ကြွက်သား Size ကိုတိုးပွါး
ဒါကြောင့်သဘာဝအလှည့်အတွက်ကြွက်သားဆဲလ်တွေထုတ်လုပ်ရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်သည့် follistatin အဆင့်ဆင့်တိုးပွါးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကပါပဲ။ Follistatin အရှင်အဆမဲ့ကြွက်သားကြီးထွားမှုဖြစ်နိုင်ခြေရန်သင့်အားဖွင့်မဖွင့်, စ myostatin နှိပ်ကွပ်ဘို့တာဝန်ရှိသည်။ follistatin သက်ရောက်မှုတစ်စုံတစ်ရာလမ်းအတွက် inhibited နေကြသည်လျှင်မူကား, ထို့နောက် myostatin တားစီး YK11 ထိရောက်မှုဆပ်မယ်လို့အရာ, ဒီလိုမဖွစျနိုငျသညျ။
ကျိုးစံချိန်ကဲ့သို့မြည်ဒါပေမဲ့ဒီဒြပ်ပေါင်းပေါ်ဒေတာ back မရှိလူ့သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများရှိပါသည်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
ငါတို့သည်အားလုံးအွန်လိုင်းဖိုရမ်များအပေါ်ကာယဗလမယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးသို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသူတို့အချိန်တိုတောင်းတဲ့ငွေပမာဏအတွက်ပိန်ကြွက်သားအကျိုးအမြတ်တန်ဖိုးရှိသိသိသာသာအဆီလျှော့ချရေးနှင့် 15 ပေါင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ခဲ့ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။
ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအရိုးများကိုထိန်းသိမ်းရန်လိင်ဟော်မုန်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ရရှိနိုင်သောအထောက်အထားများအရ YK11 အမှုန့်ကုန်ကြမ်းသည်အန်ဒရိုဂျင် receptor များနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်အရိုးအားပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။
YK11 လည်းအရိုးဆဲလ်များ၏ကြီးထွားနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆဲလ်တွေအတွက်လက်ဆောင် activated PKB (ပရိုတိန်း kinase B က) ၏ငွေပမာဏကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
အကြံပြုကုန်ကြမ်း YK-11 အမှုန့် (431579-34-9) သောက်သုံးသော
YK11 ကုန်ကြမ်းအမှုန့်များကိုအသုံးပြုခဲ့သောခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများက၎င်းကိုတစ်နေ့လျှင် ၁၀ မီလီဂရမ်မှ ၁၅ မီလီဂရမ်အထိသောက်သုံးခြင်းသည်၎င်းတို့အတွက်ကောင်းသည်ဟုဆိုကြသည်။ အခြားသူများကတစ်နေ့လျှင် 10 mg အပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ အသုံးပြုသူအများစုသည် ၄ ​​မှ ၈ ပတ်အထိစက်လည်ပတ်သည်။
Raw YK-11 အမှုန့်၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ (431579-34-9)
▲ဒါဝေးကိုသာဆယ်လူလာလေ့လာမှုများ YK11 အပေါ်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
အဘယ်သူမျှမလက်တွေ့သက်သေအထောက်အထားဒါမှမဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်. လုပ်လျက်ရှိသောတောင်းဆိုမှုများမဆို back မှပင်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများရှိပါတယ်။
ဤသည် အကယ်. သင်ဤဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူသုတေသနအကြောင်းကိုနှစ်ကြိမ်ထင်စေသင့်ပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သငျသညျထိုကဲ့သို့သော Ostarine နှင့် Ligandrol အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်ပေါင်းများကိုထုတ်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေအများကြီးပိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်ရရှိနိုင်သုတေသနရှိသည်။
ဒါဟာ YK11 အသည်းမှအဆိပ်သင့်နိုင်ဟုဆိုသည်။ မသိဘဲရမ်းမေးတဲ့စကားပြောပါကဆံပင်ကြီးထွားမှု, အသံကြိုး, ဆီးကျိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိအခြားအရေးကြီးသောအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။